Heshiiska Toledo: Maxaa lagu heshiiyey goormaase la ansixiyey | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Casudi casals | 28/07/2021 11:51 | Dhaqaalaha guud
Imisa jeer ayaan maqalnay heshiiskii Toledo iyo saamaynta uu ku yeeshay hawlgabka? Dukumiintigan oo muddo dheer la sugayay oo qaatay dhowr sano in la qoro, ayaa ugu dambeyn la ansixiyay Oktoobar 2020. Waa warbixin ku saabsan dib-u-habeynta nidaamka hawlgabka dadweynaha oo ay ku jiraan 22 talooyin oo ay abuureen xisbiyada siyaasadeed. Kuwani waa fure u ah fulinta dib-u-habaynta hawlgabka oo muddo dheer miiska u saarneyd dood. Kaliya maahan xisbiyada siyaasada inay go’aan ka gaaraan isbeddelada la ansixiyay, laakiin sidoo kale ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ayaa go aan ka gaari doona wadahadalo.
Si loo caddeeyo wax kasta oo lagu heshiiyey Heshiiska Toledo iyo sida uu u saameeyo hawlgabka, waxaan soo koobi doonnaa mid kasta oo ka mid ah talooyinka ay ansixiyeen Guddiga Baarlamaanka. Intaas waxaa sii dheer, waxaan sheegi doonaa taariikhda saxda ah ee ansaxinta dukumintigan. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato heshiiska Toledo, sii wad akhriska.
1 Maxaa lagu heshiiyay heshiiskii Toledo?
1.1 Talada 0: Difaaca nidaamka guud
1.2 Talada 1aad: Kala soocidda ilaha
1.3 Talo soo jeedin 2: Waxay ku kacdaa CPI
1.4 Talada 3aad: 'Sanduuqa lacagta hawlgabka'
1.5 Talo soo jeedin 4: Xigasho Madax-bannaan
1.6 Talo soo jeedintii 5aad: Muddooyinka ganacsiga
1.7 Talada 6aad: Dhiirigelinta shaqada
1.8 Talo soo jeedinta 7aad: Macluumaadka muwaadinka
1.9 Talada 8aad: Maareynta nidaamka
1.10 Talada 9aad: Is-dhexgalka Lambarka Bulshada
1.11 Talada 10aad: La dagaalanka khayaanada
1.12 Talada 11aad: Labadiinaba waxaad wax ku darsataan wax badan oo aad heshaan
1.13 Talo soo jeedin 12: Da 'hawlgabnimo
1.14 Talada 13aad: Carmalnimada iyo agoonta
1.15 Talada 15aad: Nidaam ku filan
1.16 Talada 16aad: Nidaamyada dhameystiran
1.17 Talo soo jeedintii 17aad: Haweenka
1.18 Talo soo jeedin 17 bis: Dhallinyaro
1.19 Talo soo jeedin 18: Dadka naafada ah
1.20 Talada 19: Shaqaalaha soogalootiga ah
1.21 Talo soo jeedin 19 bis: Digitization
1.22 Talada 20aad: Xakamaynta Baarlamaanka
2 Goorma ayaa la ansixiyay Heshiiska Toledo?
Maxaa lagu heshiiyay heshiiskii Toledo?
Heshiiska Toledo wuxuu caan ku yahay xiriirka uu la leeyahay hawlgabyada, oo ah arrin welwel gelineysa qeyb weyn oo ka mid ah dadweynaha Isbaanishka. Tallaabooyinka ugu caansan ee lagu soo rogay Guddiga Baarlamaanka waxaa ka mid ah dayactirka awoodda wax iibsiga ee hawlgabyada sharciga. Tan waxaa dib loo qiimeeyaa sanad walba iyadoo lagu saleynayo dhabta CPI (Tusmada Qiimaha Macaamilka). Si kastaba ha noqotee, waxaa jira talooyin badan oo dheeraad ah oo ay abuureen Heshiiska Toledo, dhab ahaantii waxaa jira 22 wadar ahaan. Marka xigta waxaan soo qaadan doonaa kooban oo kooban oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah.
Talada 0: Difaaca nidaamka guud
Liiska ku bilaabaya talo soojeedinta 0 ee la xiriirta difaaca nidaamka dowliga ah, heshiiska Toledo wuxuu dib u xaqiijinayaa inuu sii wadi doono ballanqaadkiisa ah ilaalinta iyo hagaajinta nidaamka amniga bulshada ee bulshada, isagoo ahmiyad gaar ah siinaya nidaamka hawlgabka. Fikradda ayaa ah in tabarucaadka bulshadu ay sii ahaadaan ilaha aasaasiga ah marka la eego daboolidda maaliyadeed ee faa'iidooyinka wax -ku -oolka ah. Intaas waxaa sii dheer, adeegyada guud iyo waxtarka aan tabarucaadka ahayn waxaa lagu maalgelin doonaa tabarucaadka Gobolka ee Lambarka Bulshada.
Talada 1aad: Kala soocidda ilaha
Heshiiska Toledo wuxuu ujeedkiisu yahay inuu soo afjaro hoos u dhaca ku yimid Lambarka Bulshada ee 2023. Intaa waxaa dheer, wuxuu ku adkeysanayaa muhiimada gudbinta dadweynaha in qayb aad u badan oo cilladan ah ay ugu wacan tahay fikradaha kharashaadka qaarkood ee aan habboonayn. Si kale haddii loo dhigo, ma ahayn inay ku bixiyaan tabarucaadka dammaanadda bulshada.
Xalkee ayuu komishanku soo jeedinayaa? Sida ay sheegtay, kharashyadan aan habboonayn waa inay noqdaan mas'uuliyadaha Miisaaniyadda Dawladda Guud. Sidan ayaa lagu maalgelin lahaa canshuuraha guud. Kuwani waa qaar ka mid ah tusaalooyinka waxa ka mid ah:
Gargaarka shirkadaha la helay sababtuna tahay dhimista tabarucaadka Lambarka Bulshada.
Heerarka siman, iyo kuwa kale, ee daaweynta wanaagsan marka la soo xiganayo.
Faa'iidooyinka la xiriira daryeelka ilmaha yar iyo dhalashada.
Kaalmada hooyonimada ee ku saabsan hawlgabka.
Talo soo jeedin 2: Waxay ku kacdaa CPI
Waa maxay CPI? Waa tusmada qiimaha macmiilka. Waa tilmaame cabiraya sida qiimaha badeecadaha iyo adeegyadu u kala duwan yihiin muddo cayiman meel cayiman. Xaaladdan oo kale, waxaa horey u jiray heshiis horudhac ah 2018. Farsamadan dib u qiimeynta hawlgabka ee ay ansixisay Rajoy waxay keenaysaa koror sanadle ah oo ah 0,25%.
Heshiiska Toledo wuxuu mar kale ku celinayaa talo bixintiisa 2 difaaca waxyaabaha soo socda: «Dayactirka awoodda wax iibsiga ee hawlgabka, dammaanad qaadkiisa sharciga iyo ilaalintiisa iyada oo loo marayo qaadashada tallaabooyinka looga golleeyahay in lagu hubiyo isu dheelitirka bulshada iyo dhaqaalaha ee nidaamka hawlgabka mustaqbalka ". Waxay kaloo sharraxaysaa taas koror kasta oo hawlgab oo ka sarreeya CPI waa in lagu maalgeliyaa iyadoo lagu soo dalacayo ilaha kale ee maaliyadeed aan la xiriirin Lambarka Bulshada.
Talada 3aad: 'Sanduuqa lacagta hawlgabka'
Arrin kale oo looga hadlay heshiiska Toledo waa waxa loogu yeero sanduuqa lacagta hawlgabka, oo loola jeedo Sanduuqa Kaydka. Intii lagu gudajiray waajibaadka loo igmaday Rajoy, tan waxaa la faaruqiyey 90%. Isla marka la helo dheelitirka xisaabaadka ay leedahay Lambarka Bulshada, Heshiiska Toledo wuxuu soo jeedinayaa in tabarucaadka dheeraadka ah dib loogu daro Sanduuqa Kaydka isla markaana lagu sameeyo lacag ugu yar.
Intaa waxaa dheer, waxay tilmaamaysaa in sanduuqani uusan u adeegaynin si loo xalliyo isu dheelitir la'aanta maaliyadeed ee dabeecadoodu qaab dhismeed tahay. Si kastaba ha noqotee, haa way noqon kartaa caawimaad muhiim ah markay tahay xallinta isu dheelitir la'aanta meertada taas oo ka dhex dhici karta kharashyada iyo dakhliga ka soo gala Lambarka Bulshada.
Talo soo jeedin 4: Xigasho Madax-bannaan
Marka laga hadlayo ilaalinta bulshada ee iskaa u shaqeysiga, heshiiska Toledo wuxuu soo jeedinayaa in la dejiyo tallaabooyin u oggolaanaya howlgab mushaharka hortii ah iyo waliba waqti-dhiman shaqeeya. Sida laga soo xigtay Komishanka, joogtaynta hawlgabku waxay u baahan tahay taas tabarucayaasha iskaa-u-shaqeysatada waxay u wajahayaan dakhligooda dhabta ah tartiib tartiib Hase yeeshee, wuxuu tilmaamayaa in qodobkan ay tahay in lagala xaajoodo loo -shaqeeyayaasha iyo ururada shaqaalaha.
Talo soo jeedintii 5aad: Muddooyinka ganacsiga
Talo soo jeedinta 5 waxay ka hadlaysaa xilliyada ganacsiga. Marka la eego, 15 sano ayaa loo haystaa inay tahay muddada ugu yar ee tabaruc si loo heli karo lacagta hawlgabka ee Lambarka Bulshada iyo kordhinteeda horumarka ah ee laga dhigayo 25 sano. Si kastaba ha noqotee, sida ugub ah waxaa ku jira Heshiiskii Toledo ee ahaa dadku waxay dooran karaan 25-kaas sano si ay iyagu uga fadli badan yihiin waqtiga la qaadanayo lacagta hawlgabka.
Marka la eego dadka leh shaqooyin cadaalad ah oo muddo dheer qaatay, xalka ay soo bandhigtay Komishanku waa in ay tuuri karaan sanad cayiman ama ay dooran karaan qaybta meheraddooda ganacsi si loo xisaabiyo hawlgabka.
Talo soo jeedin 6: Dhiirrigelinta shaqada
Marka laga hadlayo maalgelinta dhiirigelinta shaqada, heshiiska Toledo wuxuu dhigayaa taas laguma soo dallaci karo lacag ururinta bulshada. Sababtaas awgeed, waxay ku talineysaa in loo isticmaalo oo keliya aalad gaar ah iyo kooxo iyo xaalado ay tahay in loo xagliyo, sida dadka naafada ah ama khatarta ugu jira ka saarista bulshada, dadka shaqo la'aanta ah ee muddo dheer shaqo la'aanta ahaa iyo dhibbanayaasha tusaale ahaan jinsiga.
Talo soo jeedinta 7aad: Macluumaadka muwaadinka
Talo soo jeedinta 7 ee ku saabsan macluumaadka muwaadiniinta waxay ku boorineysaa Dowladda inay u hoggaansanaato waajibaadka ka saaran macluumaadka ee lagu soo bandhigay qodobka 17aad ee Sharciga Guud ee Amniga Bulshada. Sidan, mid kasta oo ka mid ah muwaadiniinta Isbaanishku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu helo macluumaad xilliyeed iyo mid shaqsiyeed oo ku saabsan xuquuqdooda hawlgabka mustaqbalka.
Talada 8aad: Maareynta nidaamka
Waxaa sidoo kale talo laga soo saaray maaraynta nidaamka Lambarka Bulshada laftiisa. Sida ku cad Heshiiska Toledo waxaa jirta baahi degdeg ah oo loo qabo xoojinta, soo kabashada iyo cusboonaysiinta shaqaalaha sidaa awgeedna lagu gaaro maamul wax ku ool ah oo hufan.
Talada 9aad: Is-dhexgalka Lambarka Bulshada
Shirkadaha caymiska iskaashi ee la xiriira Lambarka Bulshada ayaa sidoo kale ka muuqda heshiiska Toledo. Iyaga ku saabsan iyaga, talo soo jeedinta waxay soo jeedineysaa waxyaabaha soo socda:
U hoggaansan xeerka sinnaanta ee ku saabsan ka koobnaanta hay'adaha maamulka.
Sii qaddar go'an oo dabacsanaan ah ku saabsan adeegsiga kheyraadkeeda, laakiin waa inuu ahaadaa mid la jaan qaada xakamaynta adag ee ay fuliso Lambarka Bulshada.
Hagaajinta isticmaalka kheyraadka iyo khibradaha labada dhinacba, gaar ahaan marka la eego adeegyada dhaawacyada.
Talada 10aad: La dagaalanka khayaanada
Arrin muhiim u ah dalkeena waa khiyaano. Heshiiska Toledo wuxuu ku adkeysanayaa muhiimadda xoojinta dagaalka ka dhanka ah khiyaanada, kaas oo sidoo kale saamayn ku leh Lambarka Bulshada. Ujeedadaas awgeed waxay soo jeedineysaa laba xal:
In la caddeeyo goldaloolooyinka sharci-dejinta (Tani waxay ka hortageysaa, tusaale ahaan, kiisaska shaqaalaha beenta iskood u shaqeysta).
Adkee nidaamka cunaqabateynta shirkadahaas oo aan u hoggaansamin waajibaadka ay ka saaran yihiin Lambarka Bulshada.
Talada 11aad: Labadiinaba waxaad wax ku darsataan wax badan oo aad heshaan
Talo soo jeedin 11 waxay ku saabsan tahay tabarucaadka. Si kale haddii loo dhigo: xiriirka ka dhexeeya qadarka dheefaha iyo dadaalka tabaruca ee shaqaale kasta. Asal ahaan waxay mar kale ku adkaysanayaan in, marka la tirtiro sannado ama la doorto muddada, dadku waa la eexan karaa marka ay timaaddo qaadista hawlgabka. Sidan, kuwa ay saamaysay dhibaatadii u dambaysay isla markay dhammaadaan noloshooda shaqo, hawlgabkooda lama ciqaabayo.
Talo soo jeedin 12: Da 'hawlgabnimo
Marka laga hadlayo da'da hawlgabka, Guddigu wuxuu difaacayaa in tani ay u dhowdahay sida ugu macquulsan da'da hawlgabka sharci ahaan la aasaasay. Si tan loo gaaro, waa inaad si ikhtiyaari ah u kordhisaa noloshaada shaqada, kana badato da'da hawlgabka. Intaa waxaa sii dheer, heshiiska Toledo wuxuu ku adkeysanayaa mas'uuliyiinta dowladda inay il gaar ah ku eegaan xaaladaha nuglaanta ee taladani ay ku sababi karto kooxaha qaarkood. Ku adkaysiga kale ee heshiiska ayaa ah in marin u helista hawlgabka mushaharka dabadii laga fiirsado si isuduwaha dhimistu had iyo jeer u sinnaadaan.
Talada 13aad: Carmalnimada iyo agoonta
Carmalnimada iyo agoonta labadaba waxay sii wadayaan inay noqdaan kuwo wax ku biiriya, laakiin Guddiga ayaa soo jeedinaya hawlgabka la waafajiyo qoyska iyo xaqiiqada bulshada iyo duruufaha dhaqan dhaqaale ee dadka ka faa'iideysta. Sidan oo kale waxay isku dayeysaa inay hagaajiso ilaalinta dadka hawlgabka ah ee aan haysan ilo kale. Dadka ka weyn 65 ee qaata lacagta hawlgabka carmalka, heshiiska Toledo wuxuu tixgelinayaa in boqolkiiba saldhigga sharciyeynta la kordhiyo, maadaama ay u badan tahay halka ugu weyn ee dakhligoodu ka soo galo. Dhanka hawlgabka agoonta, wuxuu soo jeedinayaa in la hagaajiyo, gaar ahaan xaddiga.
Muxuu yahay saldhigga sharciyeynta
Talada 15aad: Nidaam ku filan
Talo soo jeedinta 15, Komishanku wuxuu difaacayaa in nidaamka hawlgabka dadweynaha iyo aasaasid ku filan oo la mid ah uu yahay mid taageera. Si loo fuliyo sharraxaaddan, waxay u aragtaa inay ku habboon tahay in la sameeyo tixraacyo ku habboon qaarkood, sida heerka beddelka. Tani waxay la xiriirtaa celceliska hawlgabka iyo celceliska mushaharka shaqaalaha oo dhan. Marka, kormeerka joogtada ah ee isbeddelka ayaa la samayn karaa, haddii ay dhacdo leexasho waxay u oggolaan doontaa qaadashada tallaabooyinka loo arko inay ku habboon yihiin. Maxaa ka sii badan, Guddigu wuxuu taageeraa dayactirka qaddarka hawlgabka ugu yar iyo in kaabisyadaas ugu yar ay tahay in lagu xisaabtamo canshuur, taas oo ah, Miisaaniyadda Gobolka Guud, halkii lagu biirin lahaa tabarucaadka bulshada.
Talada 16aad: Nidaamyada dhameystiran
Heshiiska Toledo wuxuu kula talinayaa hirgelinta qorshayaasha hawlgabka dheeriga ah, gaar ahaan kuwa shaqada. Kuwani waa inay noqdaan kuwo aan macaash doon ahayn iyo ka tirsan tahay nidaam sharci iyo maaliyadeed oo ka duwan. Tani waxay horumarin doontaa nidaamka hadda jira waxayna ka hortageysaa nidaamyadan keydinta in loo tixgeliyo wax soo saar maaliyadeed
Marka laga hadlayo nidaamyada hawlgabka shaqsiga, heshiiska Toledo wuxuu ku adkeysanayaa taas kuwani waa inay noqdaan kuwo hufan. Sidan oo kale, kharashaadka maamulku micnaheedu ma aha soo noqoshada taban ee badbaadiyeyaasha.
Talo soo jeedintii 17aad: Haweenka
Talo gaar ah oo loogu talagalay haweenka lama waayi karin. Komishanku wuxuu ku baaqayaa dammaanad ka qaado sinnaanta goobta shaqada iyo sidoo kale hawlgabka. Taasi waa in la yiraahdo: Waxay aqoonsan tahay in maanta ay weli jiraan farqiga jinsiga. Si loola dagaallamo, Heshiiska Toledo wuxuu soo jeedinayaa waxyaabaha soo socda:
Wax ka qabta arrinta daryeelka si shaqooyinka mihnadeed ee dhammaan kuwa haysta kuwa kale ee ku tiirsan mas'uulka ha ku abuurin faraqyo tabarucaad ah sababtan.
In kor loo qaado wada-shaqaynta adeegsiga aaladaha qaarkood, sida ogolaanshaha waalidka.
Abuur tallaabooyin oggol cadee takoorka mushaarka.
Gali nooc sixitaan ah si loo buuxiyo meelaha banaan ee xirfadaha taas oo ay sababaan khaladaadka shaqooyinka xirfadeed, sida shaqada guriga.
Hirgelinta dib-u-habeyn ujeedadeedu tahay sax dawaynta midabtakoorka oo leh shaqaale waqti-dhiman ah.
Talo soo jeedin 17 bis: Dhallinyaro
Dhallinyarada, Heshiiska Toledo ayaa weydiinaya in xaaladooda shaqo la hagaajiyo. Tani waa sida ay isugu dayeyso inay kor u qaado kalsoonida kooxdan ku leedahay nidaamka Lambarka Bulshada. Tan tan, waxay soo jeedineysaa in la qaato tallaabooyin sharci dejin oo ujeedkeedu uusan ahayn oo keliya dammaanad qaad, laakiin sidoo kale lagu hagaajinayo ilaalinta bulshada ee dadka haysta deeqda waxbarasho.
Talo soo jeedin 18: Dadka naafada ah
Marka laga hadlayo dadka naafada ah, heshiiska Toledo wuxuu leeyahay Dhammaan tallaabooyinka ujeeddadoodu tahay in laga takhaluso caqabadaha si ay dadkani u helaan shaqo hufan waa in la xoojiyaa.. Sababtaas awgeed, waxay ku adkeysaneysaa in sharcigu uu dhiirrigeliyo dayactirka howlaha xirfadeed ee dadka naafada ah isla markaana fududeeyo ku biiritaankooda.
Talada 19: Shaqaalaha soogalootiga ah
Talada kale ee Heshiiska Toledo waa doorbido imaanshaha soogalootiga sharciga ah. Sida laga soo xigtay Komishanka, kuwani waxay xoojinayaan nidaamka hawlgabka, maadaama dadka Isbaanishku ay gaboobayaan. Fikirkiisu waa inuu abuuro farsamooyin soo geliya soogalootiga suuqa shaqada. Ka faa'iideyso talo soo jeedintan si aad ugu dhawaaqdo in Maamulka uu xoojiyo dadaalkiisa si looga hortago midabtakoorka, takoorka iyo dhiig-miirashada goobaha shaqada.
Talo soo jeedin 19 bis: Digitization
In kasta oo digitization-ka ay lama huraan tahay xilligan aan ku nool nahay, haddana Toledo Pact wuxuu ka digayaa inay saameyn ku yeelan karto amarka xiriirka shaqaalaha iyo abaabulka shaqada. Waxay ku nuuxnuuxsadaan inay lagama maarmaan tahay u roon tahay in lagu daro dhammaan shaqaalaha nidaamka. Sidan, waxaa la soo jeediyay in lala dagaallamo dhaqaalaha aan rasmiga ahayn iyo sidoo kale damaanad qaadka ilaalinta xaaladaha baahida.
Dhinaca kale, Komishanku wuxuu xusayaa inay jirto khatar dhab ah oo ah in badbaadinta bulsheed ee wax ku biirisa aysan ku filnayn. Tani waa sababta oo ah xiriirka shaqada ee aaladaha dhijitaalka ahi waa kuwo isdabajoog ah oo goos goos ah. Sababtaas awgeed, waxay ku talineysaa in qaababka loo tixgeliyo wax-ku-darsiga waa in la xoojiyaa. Si looga hortago dhimista dakhliga Sooshiyaal Sikiyuuriti ee ay sababtay digitization, Heshiiska Toledo wuxuu ku adkeysanayaa ku tiirsanaanta ku-darsiga bulshada, tan iyo markii xaalada wax soo saar iyo tirakoob dadku ay waxbadan iska badaleen tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
Talada 20aad: Xakamaynta Baarlamaanka
Ugu dambayn waxay ka hadlayaan xakamaynta baarlamaanka. Shaqadan, Guddiga Kormeerka iyo Qiimaynta Heshiisyada Toledo ayaa si joogto ah loo aasaasay Dawladuna waa inay sanad walba u soo sheegtaa xaalada uu ku sugan yahay Lambarka Bulshada. Heshiiska Toledo wuxuu ku adkeysanayaa muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo la socodka natiijooyinka laga helay la dagaalanka khiyaanada, dheelitirka maaliyadeed ee nidaamka iyo ku filnaanta hawlgabka.
Goorma ayaa la ansixiyay Heshiiska Toledo?
Kadib kulamo socday in ka badan afar sano, Gabagabadii, waxa loogu yeero Heshiiska Toledo ayaa la xiray Oktoobar 23, 2020. Waxay qaadatay wada -xaajoodyo badan guddiga komishanka baarlamaanku si uu ugu dambayn u gaadho himiladiisa: in la abuuro hage nidaamka hawl -gabka dadweynaha. Waxay u yimaadeen inay ansixiyaan wadar ahaan 22 talooyin, laakiin heshiiskii Toledo wuxuu xusuusiyay in shan sano ka dib ansixintiisa, “Golaha Wakiiladu waa inay sii wadaan dib -u -eegista guud ee talooyinka Heshiiska Toledo, iyo sidoo kale qiimeyn heerka uu gaarsiisan yahay u hoggaansamida, iyada oo loo adeegsanayo qalab gaar ah oo baarlamaaneed oo loogu talagalay ujeeddadaas ”.
Waxaan rajeynayaa in hadda aad si cad uga muuqato wax kasta oo heshiiska Toledo uu muujinayo, ugu yaraan si kooban. Waxaad iiga tagi kartaa fikradahaaga faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Heshiiska Toledo
Xigasho Daniel Lacalle